Angry Birds Skin Pack (x86-x64)...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ Angry Birds Skin Pack လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! လိုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အဆင်ပြေအောင်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ...! 86 and 64 နှစ်ခုလုံးအတွက် တင်ပေးထားပါတယ်...! လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
" For 32 Bit..." (30.09 MB )
" For 64 Bit..." ( 30.08 MB )
No Response to "Angry Birds Skin Pack (x86-x64)...!"